(အရေးပေါ်သတင်း) " ၂၉ ရက်နေ့ည ၁၂ နာရီမှစ၍ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ နိုင်ငံခြားသားပြည်ဝင်ခွင့်ကိုပိတ်ပြီး" - JAPO Japanese News
လာ 29 Nov 2021, 15:47 ညနေ
ဝန်ကြီးချုပ် Kishida ဟာ တောင်အာဖရိကဘက်မှာတွေ့ရတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ် “ Omicron” ရဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျယ်ပြန့်လာမှုကြောင့်၊ နယ်မြေစည်းခြားကာကွယ်တားဆီးမှုအဖြစ် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့၊ ည ၁၂ နာရီမှစ၍ နိုင်ငံခြားသား ပြည်ဝင်ခွင့်ကို ပိတ်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်အစိုးရဟာ၊ လက်ရှိ၊ တောင်အာဖရိကစတဲ့ နိုင်ငံ ၉ ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ ပြည်ဝင်ခဲ့ပြီးသူနှင့် ဂျပန်သို့ပြန်လာခဲ့သူတို့အား၊ Quarantine center မှာ ၁၀ ရက် စောင့်ကြည့်ထားပါတယ်။ ဒီအပြင် နိုင်ငံ ၉ နိုင်ငံကနေ နိုင်ငံခြားသား ပြည်ဝင်ခွင့်ကို၊ ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ် Kishida ဟာ၊ ယနေ့ ၂၉ ရက်နေ့ညနေမှာ သတင်းထောက်များသို့ “ အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရှောင်ရှားရန် အရေးပေါ်လုံခြုံရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအဆင့်” အဖြစ်၊ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခဲ့သော business ဖြင့်လာမယ့် ကာလတိုနေထိုင်သူများနဲ့ နည်းပညာအလုပ်သင် သင်တန်းသားများ၊ ကျောင်းလာတက်မည့်သူများအပါအဝင် ဂျပန်သို့ဝင်ရောက်မည့် နိုင်ငံခြားသားများကို၊ ၂၉ နေ့ ည ၁၂ နာရီမှစပြီး လတ်တလော၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ပြည်ဝင်ခွင့်ရပ်ဆိုင်းပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
မိသားစုက ဂျပန်မှာနေထိုင်နေတယ်စတဲ့ “ အထူးအခြေအနေ” မရှိပါက၊ နိုင်ငံခြားသား ပြည်ဝင်ခွင့်အသစ်များကို လက်ခံပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအပြင် ဝန်ကြီးချုပ် Kishida ဟာ ဗီဇကွဲ “ Omicron” ရဲ့ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့ နိုင်ငံနဲ့ဒေသရှိ ဂျပန်လူမျိုးများရဲ့ တိုင်းပြည်ပြန်လာမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း တင်းကြပ်တဲ့ quarantine စီမံမှုများကို အကောင်အထည်ဖော်သွားမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအပြင် ဝန်ကြီးချုပ် Kishida ဟာ၊ ဒီတစ်ခေါက် ကာကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ Omicron ပိုးဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့အထိ သေချာတဲ့ထူးခြားကာကွယ်တားဆီးမှုဖြစ်လိမ့်မယ် ဆိုပြီးအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း Namibia နိုင်ငံကနေ ဂျပန်ပြည်ဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးမှာ မျိုးစိပ်သစ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် positive သံသယတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်၊ လျင်မြန်သော ဂျီနိုမ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုရလဒ်ထွက်ဖို့အထိကတော့ ၄ ရက်မှ ၅ ရက်အထိ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Omicron ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ရန် G7 အဖွဲ့အရေးပေါ်တွေ့ဆုံပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတည်ပြု
ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်အဖြစ်မစ္စတာ Fumio Kishida ရွေးချယ်ခံရ
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Shinzō Abe ကျန်းမာရေးကြောင့် ရုတ်တရက် တာဝန်မှအနားယူ !!!!!
(14)ရက်နေ့၊ ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ပွဲတွင် မစ္စတာ Yoshihide Suga (၇၁ နှစ်) မဲအများဆုံးနှင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ !!!!
(၁၃) ရက်နေ့၊ တစ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်မှု ၅၈၇၀ ဦးရှိပြီး၊ သေဆုံးသူ ၉၇ ဦးဖြင့် အများဆုံးစံချိန်တင် !!
ယန်း ၁.၉ ဘီလီယံကို လိမ်လည်ခဲ့သူအသက် 80 အရွယ်အမျိုးသမီး
တိုကျိုမြို့ (၂) ရက်နေ့အတွက် အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ကူးစက်လူနာအသစ် ၁၄၁ ဦး !!!!